Ny fahasamihafana eo amin'ny hidiran'ny hidiran'ny hidiran'ny hidiran'ny hidiran'ny hidiran'ny hidina sy ny fandihizana mekanika
Dredging mekanika sy fanodinana hidradrika
Miezaka ve ianao hamantatra raha mety amin'ny fanodinana lozisialy na fanodinana hidradrika mety kokoa amin'ny fitrandrahana fitrandrahana anao? Ny mpiaro ny sasany dia mety hiady hevitra fa ny fanodinana milina mekanika dia dingana mora kokoa sy tsy manahirana ho an'ny mpiompy. Na izany aza, mahomby ny fandefasana hidradrika amin'ny alàlan'ny vidim-bidy, manome fahafaha-milefitra kokoa, ary mety tsara amin'ny tontolo fanamby izay tsy voafetran'ny mpanangom-bolo. Ankoatr'izay, ny fanodinana hidraulika dia tsara indrindra ho an'ny tontolo rehefa mahazo fangatahana voavidy tsara.
Misy fomba iray hafa noho ny fanodinana dredging. Amin'ny farany, ny fanapaha-kevitrao dia mety hihena amin'ny vidiny sy ny faharetan'izany amin'ny famitana ny tetik'asa fanondrahana anao. Na izany aza, misy toe-javatra hafa izay azonao atao ny mandinika. Ianao koa dia mila manombatombana ny vatan'ny rano izay iasananao sy ny fomba ahafahana misafidy ireo karazana fitaovana fanondrahana ambany mety hanampiana anao hahatratra ny tanjonao.
Ny fanodinana mekanika dia mety tsara ho an'ny tontolo izay misy habaka ampy ho an'ny mpamory enti-miasa iray, ahafahan'ny milina entin'ny herinaratra maka sy manala ary handao fitaovana haingana.
Ny tetikasan'ny fanodinana mekanika dia matetika akaikin'ny morontsiraka. Amin'ny alàlan'ny fomban-drazana dia mitaky singa fanohanana marobe izy ireo ao anatin'izany ny mpanangom-bokatra voalohany izay manala ny fasika sy ny rano mametraka ny fasika amin'ny moron-tsiraka, ny mpanafatra hamindra ny fasika amin'ny morontsiraka, ary ny kamiao hitobaka ny fasika amin'ny toeram-pamokarana fanodinana akaiky.
Ny dredge hydraulic tokana dia azo ampiasaina amin'ny fanatanterahana iraka mitovy amin'ny antsasaky ny fotoana mampiasa loharano vitsy kokoa. Ny tombony sasany amin'ny fandefasana hidradrano dia:
Mihena ny vidin'ny asa sy ny vola miditra
Mihena sy angovo
Mihena ny vidin'ny fitaovana sy ny fikojakojana
Milamina sy mahomby
Mandritra ny fizotran'ny rano mihena, dia voasasa amin'ny fasika ny onitra rehefa ampitaina mivantana any amin'ny orinasa mpanamboatra akaiky azy. Rehefa mitombo ny fantsom-baravarana na ny fiakaran'ny haavon-tsolika, ny fantsom-boaloboky ny dredge iray dia mety ho safidy tsara azo atao hanampiana ny fampitomboana ny vidin'ny famokarana tsy miovaova.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny dredging hydraulic dia misy ny famindrana mivantana ireo fitaovana ho an'ny zavamaniry fanodinana. Io dia mamonjy fotoana sy vola, manafoana ny filàna herin'asa fanampiny sy ny fikirakirana avo roa heny ny fitaovana.
Misafidiana ny fitaovana fanondranana mety amin'ny asa
Milina hidiran'ny hidradrika dia mety tsara amin'ny vatan-drano lehibe kokoa izay mahasarotra ny fitaomana ny mpangalatra ary mangatsiaka ny toe-piainana indraindray. Ny fitrandrahana miaraka amin'ny dred a hydraulic no fomba mahomby indrindra hanalàna ireo fitaovana tsy tapaka, na fasika na gravel, na fametrahana sira masaka.
Ny dredge hidiran'i Ellicott dia mety amin'ny tetikasa fitrandrahana. Izany dia satria ny dredges dia natao hampihenana ny vidiny isan-taonina sy hanatsarana ny vokatra. Ny dredge lehibe kokoa an'i Ellicott dia misy amin'ireo tetik'asa izay mitaky ny halalin'izy ireo hatramin'ny 60 '(18 m).
Ny seraseranay dia nampiasaina eran'izao tontolo izao ho an'ny tetik'asa mpitrandraka samihafa avy any St. Petersburg, Florida (Etazonia) ka hatramin'ny faritanin'i Marinduque any Philippines. Ho an'ny tolo-kevitry ny dredge dia fenoy ny endrika tetikasa anio na mifandraisa aminay amin'ny mailaka ao amin'ny sales@dredge.com.